ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 7) | Lumyo Chit
Permalink aungkhaing က January 3, 2012 – 10:07pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပသီအကြောင်းက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ပသီလူမျိုးတယောက်လောက်ကို အပြင်မှာ မြင်ဖူးချင်တယ်။
Permalink kotinmaung က January 4, 2012 – 9:28pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ခုနှစ် မတိုင်မီ
ပဲခူးမြို့တွင်(၁၆၁၇) `၌ ဆင်မြူရယ် ရှိတ် အနိစ္စရောက်၍၎င်း၏ပစ္စည်းများကို ၎င်းအား ဆက်ခံ တောင်းလာမှ ပေးရန် မြန်မာဘုရင်က သိမ်ဆည်းထားသည် ဆိုသော သတင်းကို ပဲခူမြို့မှပြန် လာ သော မွတ်ဆလင်ကုန်သည် များ က အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ မဆူလီပထန်ရှိ ကုန်တိုက် သို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။(ဆိုလိုရင်းမှာ ပဲခူးမြို့တွင်(၁၆၁၇) ခု ကတည်းမွတ်ဆလင်ရှိ နေကြောင်း ထင်ရှားသည်။)
ကျန်စစ်သားမင်းနန်းသစ်တည်ဆောက်ပွဲ`၌ မြန်မာ သီချင်း၊မွန်သီချင်း၊ ကုလားသီချင်းများ သီဆိုကြ ဟန်ရှိသည်။ ပုဂံကျောက်စာတွင်မြန်မာ ပန်တျာ ၊ကုလားပန်တျာ ၊မြန်မာစည်၊ ကုလားစည်၊ မြန်မာကခြိယ်သည် ၊ ကုလား ကခြိယ်
သည် ဟုရေးထိုးဖေါက်ကြသည်။ပုဂံကျောက်စာ အထောက်အထားများအရ ကုလားပန်တျာ၊ကုလားစည်၊ကုလားကခြိယ်
များ ကုလားများ၊ ကုလားကျွန်များ ပုဂံခေတ် ပျူမြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
( ဘုန်းတင့်ကျော်၊ ပိတောက်ပွင့် သစ် အောက်၊အနုပညာမဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁၆) ဖေဖေါ်ဝါရီလ -၂၀၀၈ )
ကောဇ သက္ကရာဇ် (၆၉၅) ခုတွင် အရှေ့ဘက်ရှိ သက်တို့သည် တောင်စဉ်ကျေးရွာများဖျက်စီး နေသည် ကို ချေမုန်းရန်
စစ်ကြော င်းအမျိုးမျိုးခွဲ၍ချီတက်ရာ`၌ အမတ်ကြီး(စနဲ)ပါသောစစ် ကြောင်း ကိုယ်တော် သူရဲ ၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်း) ၊ ကုလား၃၀၀၀၀(သုံးသောင်း) ၊ဘီပေါင်း ၅၀၀၀၀(ငါးသောင်း) နှင့်အတူ မအီလမ်းမှ စစ်ချီတက်သည်ဟု တွေ့ရှိရသည်။
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 5:38pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
အစ္စလာမ် သာသနာပိုင် အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နိ တပည့် ငရွှေလူး၊ငအေးတို့က နိုင်ငံတော်အတွင်းမြို့ရွာများရှိသည့်
ပသီကုလားတို့ကို ဘာသာကျမ်းရှိ်သည့်အတိုင်း အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီပြသရာ နာခံကြစေ။(အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်ချက်)
သက္ကရာဇ် ၁၁၆၉ ခု တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်(၃) ရက်နေ့ နာခံဘယ ကျော်ထင်တွင်ပြန်
ရခိုင် (၄) မြို့၊ပုသိမ် (၄) မြို့ ။ဟံသာဝတီ (၃၂)မြို့ ၊ ရေး၊ မြိတ်၊ ထားဝယ် ၊တနင်္သာရီ ၊အာသံ၊မဏိပူရ၊ယိုးဒယား ၊
ဇင်းမယ်၊ ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိပသီ၊ကုလားများအပေါ် ယနေ့မှ စ၍ ဆရာတော်ဘုရားဟုခေါ်စေ။ အာဗစ်ရှာဟုခေါ်လျှင် လျှာပြတ်စေ။ ကျောက်စီတောင်ဝှေး နှင့်ကျောက်စီ ခြေနှင်းစီးစေ၊ ဆရာတော် ဘုရား အလိုရှိ၍ ဆင့်ခေါ်လျှင် နန်းတော် တိုင်ဖက်ငြားသော်လည်းခွါယူစေ။ နိုင်ငံတော်အတွင်းအရပ်ရပ် အမြို့မြို့အရွာရွာမှာ ရှိနေသည့် ပသီကုလားတို့ကို ဘာသာကျမ်းရှိသည့်တိုင်း အာဗစ်ရှာဟိုစိုင်နီပြသရာနာခံကြစေ။(အမိန့်တော်)
ကိုးကားကျမ်း – (ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနထုတ် မြန်မာမင်း အုပ်ချုပ်ပုံစာတမ်း၊စတုတ္ထအပိုင်း စာမျက်နှာ -၂၅၄)
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 5:41pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပါရှန်တို့၏ စာပေကုိူ ပါရစီဟူ၍ခေါ်ကြသည်။ပါရစီကို အချို့ကုလားနှင့် မြန်မာတို့က ဖါရစီဟုလည်း ခေါ်ကြပြန်
သည်။ပါရစီ(ပါရသီ) ဟူသောပုဒ် ၌(ရ) အက္ခရာ ကိုကျေပျောက်ကာ (ပ) ၌ (ရေးချ) ဖြုတ်၍ ပသီ ဟုမြန်မာ တို့က ခေါ်ဝေါ်
ကာလကြာသောအခါ ပါနတ်ဒေသမှ လာသည့်ပါရဆီ ပါရှန်လူမျိုးခေါ် အီရန်လူမျိုး များကိုသာမက မူဆလင်ဘာသာ
၀င်ဟူသမျှကို သိမ်းကြုံး၍ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိခဲ့ပုံ အထောက်အထားမျးကိုလည်းတွေ့ရပေသည်။
၁ – ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် – ပုသိမ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအသင်(၁၉၅၅ – ၅၆)ထုတ် မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ – ၅
၂ – လမ်းစဉ်ပါတီထုတ် အခြေပြမြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း စာမျက်နှာ ၂၂၂
၃ – ဆရာမာဃ – ပုသိမ်ရာဇ၀င်
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 10:10pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
၁မှ ၆၀ ထိ စုစည်းအပိုင်း( ၁ )ဟု ဖေါ်ပြခြင်း
(ကျန်ရှိသော အချက်များကို အပိုင်း (၂ ) ၊ (၃ ).. စသည်ဖြင့်ဖေါ်ပြသွားပါမည်။)
ဦးလှဒင်မြန်မာဘာာပြန်ဆိုသောရတနာရွှေမြေ စာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၅၀ တွင် ရှေး ဟောင်း သုတေ သနကျောက်စာ လိုက်စားသူတို့က သိရိဂုတ္တရတောင်ကုန်းသည်တစ်ခါက တည် ရှိခဲ့ဘူးသော ဓည ဝတီမြို့ ဟောင်း၏အရှေ့မြောက်ဖက်
တွင်တည် ရှိကြောင်း ထိုမြို့တော် ၏မြို့ရိုး ဟောင်း များကို ယခုတိုင်တွေ့မြင်ရ သဖြင့် ထိုမြို့ရိုးကို အေဒီ ၁ ရာစုထက် စော ၍တည်ထောင် ခဲ့သောအိန္ဒိယ ကုလား မြို့တော် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းစသည်တို့ကို ကျောက်စာ အထောက် အထားများအကိုးအကား များ စွာ ဖြင့်ပြကြသည်။
မြောက်ဦးမြို့၏ထူးခြားချက်ကား ကုလားမွတ်ဆလင်များနေခြင်းဖြစ်သည်။ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း ကလည်း အ ဆန်း မဟုတ်ပေ။ ဒုတိယမြောက်ဦးခေတ်တွင် ဘင်္ဂလား ၁၂ ပြည်နယ်ကို ပြန်လည် တိုက် ခိုက် သိမ်း ပိုက် ရာ`၌ စစ်သူကြီးဓမ္မဇေယျ သည်ကုလားပြည်မှ ကုလား ဘုရင်နှင့်တကွ သုံ့ပန်းတို့ကို ဖမ်းဆီး ခဲ့ရာတွင် ကုလား (၁၀၀၀၀) ကို ဆင်စာမြင်း စာရိတ် အစု၊ကုလား(၂၀၀၀) ကို ဝါးခုတ်၊သစ်ခုတ် အစု၊ ကုလား (၁၀၀၀) ကိုလယ်လုပ်၊ ကုလား(၁၀၀၀၀) ကိုဟင်းသီးဟင်ရွက်၊ငရုတ်၊ကြက် သွန်၊ကွမ်း ဆက်အဖွဲ့ အစု ကုလား (၂၀၀၀) မိဖုရား၊သားတော်၊ သမီးတော်များ၊ အိမ် ၌ ရေခပ်၊ထင်းခွဲ၊ ကုလား (၂၀၀၀) လေးကိုင်းစစ်သည်၊ကုလား (၁၀၀၀) ရက်ကန်းရက် ၊ကုလား (၁၀၀၀) ယာဉ်ထမ်း၊ ကုလား(၁၀၀၀) ဆားချက်၊ ကုလား(၁၀၀၀)မြို့တွင်းမြို့ပြင်အမှိုက်ကျုံး၊ သန်ရှင်းရေး စသည်ဖြင့် ကုလားစုစုပေါင်း
(၄၇၅၀၀) ဦး ဖမ်းဆီးလာကာတာဝန်ခွဲဝေ အပ် နှင်း ပေးခဲ့ သည်ဟုရေးသားဖေါ်ပြ ထားသည်။(စာ ၂၅၇-၂၅၈)
(သုတပဒေသာ – ဝိဇ္ဇာ)ဆုရ။ ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ။
(စာရေးသူ ကလောင်အမည် မောင်မိုးယံ ၊ မူရင်းအမည် ဗိုလ်မှူးမျို့သန့်(ငြိမ်း)။
စာပေဗိမာန် စာတည်းမှူးက မှတ်ပုံအမှတ် ၀၇၄၉၂ ဖြင့် ပုံနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၃၉၁၁ ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။)
ရမ်းဗြဲ တောင်ကျောင်းဆရာတော် ရေး ရခိုင်ရာဇဝင်သစ် ပထမအုပ်စတုတ္ထတွဲ ၊ စာမျက်နှာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃ တို့ တွင်ငနှလုံမင်း(၁၂၃၄ – ၁၂၃၇)လက်ထက် ကုလားပြာည်ကိုစစ်ထိုးရာ သုံ့ပန်းအဖြစ် (၄၇၅၀၀) ဦး ခေါ်လာပြီး မင်းသုံး၊
မိဖုရားသုံး၊ မင်းသားသုံး၊ မင်းသမီးသုံး မှူးမတ်သုံး အတွက် အသီးသီး အစုနှင့် ခွဲတော်မူသည်။ ဤကားဓညဝတီ
အရေးတော်ပုံ`၌ ပါသောငနှလုံမင်း အကြောင်း တည်းဟု ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
Francois Bernier ၏မှတ်တမ်းနှင့် Father Delaunoite ၏ Catholic encyclopedia အရ ၁၆၂၁ မှ ၁၆၂၄ ခှုနှစ်အတွင်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူများမှာ (၄၂၀၀၀) လေးသောင်း နှစ်ထောင် ရှိ သည်ဟု ဆို၏ ဆာအာသာဖယ်ယာက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသူ ဦးရေးသည် ရခိုင်ပြည် စုစုပေါင်း လူဦး ရေး၏ ၁၅ % ရှိသည် ဟု ဆိုထားသည်။
ရခိုင်ဘုရင် ကထိုဖမ်းဆီးယူလာ သောလူထဲတွင် အတတ် ပညာ ရှင် ဖြစ် သူ လေးပုံတစ်ပုံ ခန့်ကိုယူ ထားပြီး
ကျန်လူများကို တစ်ဦး လျှင် (20 Rs မှ 70 Rs ဖြင့် )ဈေးတင်ရောင်း ချ ခဲ့သည်။ ထိုဖမ်းဆီးကျွန်များကို
လက်ဖဝါးဖေါက်ပြီး ကြိမ်လုံးဖြင့် ချည်နှောင်ကာ ကြက်၊ငှက် ကဲ့
သို့ သင်္ဘော ကုန်တွင်း ထဲ ထည့်သွင်းပြီး သယ်ဆောင် လာခဲ့သည်ဟုဆို၏။
(က)- မင်းဘာကြီး ခရစ်ဝက္ကရာဇ်(၁၅၃၁ – ၁၅၅၃) နှင့် မင်းရာဇကြီးတို့ လက်ထက် က သောင်းထီး ကျွန်းမှကုလားေ
လးထောင်စီ ဖမ်းဆီးခေါ်လာခဲ့ကြောင်း၊ မင်းရာဇာ ပဲခူးသို့ စစ်ချီခဲ့ ရာတွင် ကုလား မွတ်ဆလင် သူရဲကောင်း ၅၀၀၀၀ (ငါးသောင်း)သားတော် အိမ်ရှေ့ မင်းသား မင်းခ မောင်း ပိုမော်တင် ချောင်း၊ သံလျှင်မြို့သို့ စစ်ချီလေသည်ဟု ပါရှိသည်။မောရစ်ကော လစ် ရေး ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ ၁၂ တွင် (ထို့ကြောင်းရခိုင်ပြည် သည် ပထမနှစ် (၁၀၀၀) အတွင်းကုလားမင်းများအဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်) ဟူ၍လည်းကာင်း၊စာမျက်နှာ (၁၃) တွင် ခရစ် ၉၅၇ ခှုစ် နောက်ပိုင်းတွင်ရခိုင်ရာဇဝင် စတင်ခဲ့တောသည် ) ဟု လည်းကောင်း စံရွှေပု ကဆိုသည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊စာမျက်နှာ
၂၁ တွင် ခရစ်နှစ် ၉၅၇ မတိုင်မီက
(ခ) – အထက်ပါစာအုပ်၏နောက်တစ်နေရာတွင် တရံရောအခါ စစ်တွေကျွးန်ကုလားတို့ကို ဓါးပိုင် ကြီး သောက်ကြယ်က ခေါ်၍ ဆုလာဘ်ပေးကြောင်း ၊မင်းမသိအမတ် မြို့သစ်စား ရွှေသဲ သိစေလျှင် ထို အကြောင်း ကိုလျှေက်ထား လေသော် ဟုပါရှိရာ (ပြည့်ရှင်မင်းမဟာရာဇာ လက်ထက်) စစ်တွေမှာ ထိုစဉ် ကပင် ကုလားမွတ်ဆလင်များ ရှိနေကြောင်းထင်ရှားနေသည်။
ရခိုင်အမျိုးသားစာရေးဆရာများ၏အထက်ပါမှတ်တမ်းများအရ ထိုစဉ်က မူဆလင် ဦးရေ အများ အပြားရှိသည်ကိုခန့်မှန်း
နိုင်သည်။ ဤ အရပ်ရပ် မူဆလင်များသည် ရှူးဂျား မင်းသား ၁၆၆၀ ခုနှစ်ရခိုင် သို့ခိုလှုံလာသည့် ကာလ ထက်အချိန်ကာလ အားဖြင့် စော နေကိုတွေ့ ရ သည်။ရခိုင်ဘုရင် လေးသည် (ကမန်)တပ်ဖွဲ့ဝင် ရှားရှူးဂျား မင်းသား နောက် လိုက်များ ထက်ရှေးကျသူများဖြစ် သည်ရခိုင်ဒေသတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့အစ္စလာမ်ဘာသာ သို့ကူးပြောင်းခဲ့သည်ဟုဓညဝတီဆရာ တော် ဦးညာဏ၏ရခိုင်ရာဇဝင်ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၁၆၁- ၁၆၂) `၌လည်း ကောင်း၊ ဦးကြည် မြန်မာ သမိုင်း စာမျက်နှာ (၁၆၀ )`၌လည်းကောင်း ဦးလှထွန်းဖြူ ၏ ငွေစကားရည်လုပွဲစာအုပ် စာမျက်နှာ (၄၇) တွင် လည်း ကောင်းရေးသား ဖေါ်ပြထားသည် ကိုတွေ့ရှိရသည်။
Maurice Collis ရေးသော The Land Of the Great Image အား ဦးလှဒင်က ရွှေရတနာ မြေ အမည်ဖြင်ပြန်ဆို ရေးသာဘာသာပြန်ဆုရစာအုပ်၏ စာမျက်နှာ (၁၉၁) တွင် အေဒီ ၆၃၀ ခုနှစ် က ရခိုင်ပြည် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ပါဝင်ခဲ့၍ နေထိုင်သောလူမျိုးများမှလည်း ဘင်္ဂလား ပြည် မှလူမျိုး များ နှင့်အသွင် တူကြ သည်။ ထိုနည်းတူဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ နှစ်မျိုး စလုံးပြိုင်တူထွန်းကားခဲ့ သည့်အထောက် အ ထား များ ရှိသည်ဟုဖေါ်ပြသည်။အိန္ဒိယ တိုက် ငယ်တွင်အထူးသဖြင့်ပါကိစ္စတန်နှင့်ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အများစုသည် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ကူးပြောင်းကိုးကွယ်ရာဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောရခိုင်ပြည်`၌လည်းမြောက်ပိုင်း
`၌လည်းရခိုင်လူမျိုးဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုမှာအစ္စဘာသာသို့ကူးပြောင်းကိုး ကွယ် လာကြသည်။ ထိုသူများမှာရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်ကပြည်သည် ဘင်္ဂလားသစ္စာတော် ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ဘင်္ဂလား(၁၂)မြို့ခေါ် ဘင်္ဂလား ဒေသ သည်ရခိုင် ပြည်၏ အင်ပါယာ အဖြစ် သို့လည်းကောင်း အပြန်အလှန်ကျရောက် ခဲ့ကြကြောင်း History Of Burma နှင့်သမိုင်းစာအုပ်များ တွင်ဖေါ်ပြထား သည်ကိုတွေ့ရသည်။
(က)- ၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို
ဗမာ ဘုရင် သိမ်း ပိုက်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်သည် ဘင်္ဂလားဒေသ ရှိ ဂေါလ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ်ကကောင်းမွန်စွာလက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလား ဂေါလ် ဆူလတန် ဘုရင်၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ထီးနန်းကို အရယူခဲ့ရသည်။ အေဒီ ၁၄၃၀-တွင် မြောက်ဦးမြို့ တည် ၍ မြောက် ဦးခေတ် ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ)- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ပြန့်နှံ့ပုံကို လေ့လာခဲ့ရာ အေဒီ ၈-ရာစုနှင့် ၁၆-ရာစု အတွင်း ပါရှန်းနှင့် အာရဗ် သင်္ဘောများ ရေကြောင်းသွားလာခြင်းသည် အရှေ့ဖျား ပင်လယ် များ တွင်ပင် လယ်များတွင် လွှမ်းမိုး ခဲ့သည်။ ၎င်းပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရောင်းဝယ် ရေးစခန်း များသို့ လည်း ပါရှန်နှင့် အာရဗ်ကုန်သည်တို့ အခြေ ချ နေထိုင်ခဲ့သည်။
(င)- စန္ဒ၀ိဇယ (၁၇၁၀-၁၇၃၁)လက်ထက်ကျမှ ထိုကမန်တို့အား နှိပ်ကွပ်ခဲ့သည်။ များစွာ သော ကမန် တို့အား ရမ်းဗြဲကျွန်း၊စစ်တွေအနီး သင်းဂနက်၊ သာယာကုန်းကျေးရွာများသို့ ပို့ထားခဲ့သည်။ ရခိုင် ပြည်နယ် ကမန်မွတ် စလင်မ် တို့အပြင် စစ်တွေမြို့ အရှေ့ပိုင်းဒေသ
များ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် သံတွဲ တစ်ဝိုက်တွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြ သော အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် ရခိုင်များ အနှံ့
(စ) – ၁၅၃၉ အေဒီတွင် တပင်ရွှေထီး ပဲခူးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် ၁၅၉၉ အေဒီတွင် တောင်ငူ ဘုရင် ပဲခူးကို တိုက် ခိုက်ခဲ့စဉ်တွင်
ဖမ်းဆီးရမိသော မွတ်စလင်မ်များ အေဒီ – ၁၅၄၇ီတွင် တပင်ရွှေထီး မြို့ဟောင်းမြို့ ကို ၀င်တိုက် ခဲ့စဉ် နှင့်၁၇၀၇ အေဒီတွင်
အရာရှိ များ သံတွဲကို တိုက်ခိုက် ခဲ့စဉ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ သော မွတ်စလင်မ်များ၊ ၁၆၁၃ အေဒီတွင် အနောက်ဘက်လွန်မင်း
သန်လျင်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ စဉ် သန် လျင်မြို့ ကျပြီးစအခါ ဒီဗရစ်တို၏ နောက်လိုက်မွတ်စလင်များ (သို့မဟုတ်) စစ်ပွဲပြီး စ အချိန်နှောင်းမှ ရောက် ရှိလာသော သင်္ဘော များမမွတ်စလင် များအား ရွှေဘိုခရိုင်၊ မြေဒူး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ ပင်းယနှင့်
ခံလူး၌ လည်းကောင်း၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင် လက်ပံ၌လည်း ကောင်း၊ ရမည်းသင်းခရိုင်ယင်းတော် တို့၌လည်းကောင်း နေရာချထားခဲ့ ကြောင်းတွေ့ရသည်။
(၁) တောင်ငူ (၂) ရမည်းသင်း (၃) ညောင်ရမ်း (၄) ယင်းတော် (၅) မိတ္ထီလာ (၆) ပင်းတလဲ (၇) တဘက်ဆွဲ (၈) ဘောဓိ
(၉)သာစည် (၁၀) စည်ပုတ္တရာ (၁၁) မြေဒူး (၁၂) ဒီပဲယင်း စသည်တို့ တွင် ဖြစ်သည်။အ ထက် ဖော်ပြ ပါ အတိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့သည် အာရဗ်သင်္ဘောများပျက်၍ ၀င်ရောက်နေ ထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အာရဗ်ပါရှန်ကုန်သည်များကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေး စခန်း များ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ သို့ ရွေှ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ပျံ့နှံ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရခိုင်ဘုရင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ၊မကွဲခြားဘဲမျှမျှတတအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးလွပ်လတ်ခွင့်ပေးခြင်း ၊ဘုရင်ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်စည်းလုံးရေးအတွက် အစ္စလာမ် အမည်ဘွဲ့ ကိုခံယူခြင်း ရှေးရခိုင် ဘုရင်များ၏ အမြော်အမြင်ကြီး
မားပုံကိုစံနမူနာ ယူစရာဖြစ် သည် ဟု ဦးကြည်(B.A )ရေးမြန်မာရာဇဝင်သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာ ကို ကိုးကား ၍တိုင်းရင်း သား
လူမျိုးစု သတင်လွှာက ရေသားဖေါ်ပြထားသည်။
၁၆၆၈ ခုနှစ် မြောက်ဦးမြို့တွင် ရှားရှူးဂျားဗလီကြီးကို တည်ဆောက်ထားသည်ကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်ရသော ရှေးခေ တ် ကပင်မွတ်ဆလင်များ ရှိနေကြောင်းသမိုင်း အထောက်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဘုရင်သုံးဒင်္ဂါးများတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ဂုဏ်တော် ကိုတံးဆိပ်အဖြစ်ထု ထားသော အ ထောက် အထားများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာ သည် ရှေးနှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်ကတည်း က ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း သာဓက ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဒုတိယအရေးပိုင် Deputy Commissioner Col: Nelson Devies ၏မှတ်တမ်းအရ ၁၇၃၆ ခုနှစ်တွင်စစ်တကောင်းမှစစ်တွေသို့ မာနိခ်ျ နှင့်ကျန်ညီနောင် ရောက်ရှိကြောင်းကို ဖေါ်ပြ ထား သည် တွေ့ရသည်။
(က)- ပုဂံခေတ်တွင် မြန်မာမှုပြု အစ္စလာမ်စာပေဟူ၍ သီးခြားမတွေ့ရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ် သာသနာသည်ပုဂံခေတ်ကပင် စတင်ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အစ္စလာမ်စာပေများ လည်း ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။ ပုဂံခေတ် မြန်မာစာပေ တွင်’ကျောက်စာ ‘ များကိုသာ အများ ဆုံးတွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောက်စာရေး ထိုးသည့်အလေ့အထကို အီဂျစ်လူမျိုးများက စတင်သည်။ အီဂျစ်နှင့်အခြားမြေထဲပင်လယ်ဒေသများတွင် တွေ့ရသည့် ကျောက်စာများမှာ ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ပုဂံခေတ်၌ပင် အရဗီဘာသာနှင့် ရေးထိုးထားသော ကျောက်စာ များရှိသည်ဟု သိရှိသည်။
”[တတိယနှစ် ၀ိဇ္ဇာသင်တန်း (သမိုင်းသာမန်) သမိုင်းဘာသာပို့ချချက်များ၊ စာ-၃၇၊ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း သင်ရိုး အမှတ်(၃၀၃)အတွဲ(၂)၊ တက္ကသိုလ်စာပေး စာယူသင်တန်း၊ စာစဉ် (၁၁၅) ၁၉၈၇၊ စက်တင်ဘာ]
(“The Muslims of Burma” A study ofaminority Group,
တပင်ရွှေထီး လက်ထက် သက္ကရာဇ် ၈၉၇ က ဟံသာဝတီသို့ စစ်ချီရာ ပသီကုလား ပန်းသေး တို့ တစ်ဖက်မှ တိုက်ခိုက်ခုခံခြင်း (မှန်နန်းရာဇ၀င်(ဒုတိယတွဲ) စာ ၁၈၆) အရလည်းကောင်း သမိုင်း သုတေသီ ပညာရှင် များ၏ ရေးသားပြုစုထားသော မှတ်တမ်းများအရ အစ္စလာမ် ဘာသာ သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ၁၂၀၀ ခန့်မှစ၍ရောက်ရှိ အခြေချ နေထိုင် ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပဲခူးမြို့တွင်(၁၆၁၇) `၌ ဆင်မြူရယ် ရှိတ် အနိစ္စရောက်၍၎င်း၏ပစ္စည်းများကို ၎င်းအား ဆက်ခံ တောင်းလာမှ ပေးရန် မြန်မာဘုရင်က သိမ်ဆည်းထားသည် ဆိုသော သတင်းကို ပဲခူမြို့မှပြန် လာ သော မွတ်ဆလင်ကုန်သည် များ က အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ မဆူလီပထန်ရှိ ကုန်တိုက် သို့ အကြောင်း ကြားခဲ့သည်။(ဆိုလိုရင်းမှာ ပဲခူးမြို့တွင်(၁၆၁၇) ခု ကတည်းမွတ်ဆလင်ရှိ နေ ကြောင်း ထင်ရှားသည်။)
>>>အပိုင်း(၂) သို့ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်>>>
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 10:33pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ပသီ အကြောင်းဘာမှ မသိဘဲ စိတ်ဝင်စားတာ ကောင်းပါတယ်ဆို့တဲ့စကား။ပသီအတု နှင့်တွေ့ ရင် စိတ်ပျက်သွား လိမ်မည်။
ဒီဇင်္ဘာ ၂၅ ရက် (ဗိုလ်မှူးဗရှင် ၏ ၉၇ နှစ်မွေးနေ့ ကို ဒေါ်စောရွှေခန်းမ တွင်ကျင်းပလို့ကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ယနေ့တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့ ပသီခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူနှင့် ဆွေးနွေးချင်လို့ အချိန်ယူပြီး တရက် သူ့အိမ်ထိ လိုက်သွားတယ်။လိုက်သွားတာလည်း သူလက်ထဲမှာ (၀မ်အိုဝမ်
ကျော်ဝင်းမောင်း ရေး တဲ့ တိမ်မြုပ်နေသော ပသီလူမျိုးအကြောင်း) စာအုပ်ကို တွေ့မိလို့ သွားတာပါ။အကြာကြီးသူနှင့်
တွေ့ဖြစ်တယ်။ ပသီ စာအုပ် ခဏလေး စာမြည်းခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။။ကျွန်တော် ပသီစာတမ်းတစ်ခုပြုစုနေလို့ပါ
လို့ မိတ် ဆက်စကားလည်းပြော ထား သေးပါတယ်။လုံဝကြည့်ခွင်မရခဲ့ဘူး။တခြားဘာတခုမှလည်း အကူအညီ မရခဲ့ဘူး။
သူကိုယ်တိုင်လည်း ပသီအစစ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ဟာကိုတောင်းပါတယ်။သူ့ကို ကျွန်ရေးတဲ့စာတွေကို
ပသီဝပ်ဆိုဒ် မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်ကြောင်းလိပ်စာပေးပြီး ထွက်လာပါတယ်။ သူ့ဇစ်မြစ်ကို လေ့လာကြည့်တော သူပသီ အစစ်မဟုတ်ဘူး။အတုအယောင် ဒေါင်းယောင်ဆာင်သောကျီး ဖြစ်နေတယ်။တစ်နေ့( ငါးခူးမ တစ်ကောင်နဲ့ တစ်လှေ
ပုပ်သွားလိမ်မည်။) ဆိုတာ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။သူ့လိုလူတစ်ယေက် ကပသီလူမျိုးကို ဦးဆောင်မယ်ဆိုတာလည်း
လုံ့ဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမည် မဖေါ်ပြတောဘူး။ကူညီတာနှင့် ပသီအယောင်ဆောင် လုပ်တာမတူပါဘူး။- စလာမ်
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 10:42pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
၁။ – ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၇ – ခု သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ
(၂၆)သန်းရှိခဲ့ပြီးလူမျိုးစု (၇၀) ဟုဖေါ်ပြခဲ့သည်။
၂။ – ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပုံစံ ရေးသွင်းရန်ညွှန်ကြားချက် (၉- ၁၂- ၁၉၇၂ )
ထုတ် လူမျိုးများစာရင်းစာမျက်နှာ (၄၃) တွင် -တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ( ၁၄၄ ) မျိုး
၃။ – ၁၉၇၃ -ခု သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးကျေညာချက် လှုံဆော်ရာ တွင်
လူမျိုးစု ( ၂၉ ) မျိုး ဟုလူမျိုးစုစာရင် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
၄။ – ယခု အခါနောက်ဆုံး ( ၁၃၅ ) မျိုး ဟု ပြဌာန်းထားသည်။
ဤ ကဲ့သို့အာဏာရှင်အစိုးရက သူသဘော အလိုကျလုပ်ပြီး
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 10:56pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
……ဟု ဦးရာဇတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
Bigot General Ne Win’s
policy guidline speech
Vs General Aung San’s
promise to them
Bigot General Ne Win‘s anti-Muslim/Indian/Chinese xenophobic policy guidline speech Vs General Aung San‘s promise to them.
And U Razak was virtually tricked by his colleagues.
Whether Majourity or minority or an individual only i.e. even if ONE citizen alone, IN TRUE DEMOCRACY, ALL have equal rights. If we get EQUAL RIGHTS only, we will be happy, all will satisfy and there may be lasting piece. We need to practice MARITOCRACY.
We felt that we, Burmese Muslims were persuaded or tricked to call ourselves Myanmar. So we regarded or enlisted as Race=Myanmar, Religion Islam and became Myanmar (Burmese) Muslims. But Gen Ne Win started an anti-Islam campaign by calling us Kalas, Kala dein, Hybrids, Mi Ma sit Pha Masit although he was same as us and conceiled (many knew but scared to reveal) that he wasaBurmese-Chinese Hybride or Ka Pyar.
Permalink kotinmaung က January 6, 2012 – 11:00pm တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ရခိုင်ပြည်မှအရဗီကျောက်စာမှတ်တမ်း – ၂ ခု
Inscription I is clearlyarecord of the completion of the tomb of one Akalkhan onadate between the 13th and 23rd Muharram in the year 900 and on the day of the funeral feast held on the 40th day after “his death. The doubtful words, underlined, would not seriously alter the meaning.
Line I: Farmsn of the high and august authority :The humble Kawal Khan, trader ( Karbari ), with ( his ) son (and) small … … daughter (girl),
Line II: has asked for the help of the Sultan Nssir b. Mansnr Shah, may his kingdom endure (that ?) if excess ……which remain is given,
Line III: I (we) would carry to freedom… Order is issued that …husband be not separated (?) ‘, No one call the sons of these to task ….
Line V: Jangiz Man (ik) son of Anik, should accompany them to Zaznagar… …; on another side …… Abisar Patra, Kalu. Patra, Kamal Din
Line VI: Patra, Branka Bir Patra, Gosaimia … …, in the presence of (all ?) these ; …… decreed (?) If any one………
Line VII: he will ………; this (writing) … … on the … … of Qadi ‘Ata Malik. Therefore whoever does not heed this word will loose faith in the two worlds. Dated on the 19th of the month of Ramadan, Year 900. ( 1494-95 A.D, )
It will be useless and premature to comment on this very imperfect text. But the names of the Sultan Nssir ibn Mansur, (L.II),Qadi ‘Ata Malik and the date 900 (L. VII) admit of no doubt. Who could be this Sultan ? No Arakanese King is known who called himself by this name.2
Qadi ‘Ata Malik of the inscription cannot be identified with Makhdum Shaikh al-Masha’ikh Maulana ‘Ata Wahid al-din who is mentioned in Bengal inscriptions ranging in date from 1363 to 1512 and who apparently died before 1363 in Devikot ( Dinajpur, now in West Bengal).3
Permalink kotinmaung က on Sunday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
ရခိုင်ပြည်ရှိ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးအချို့
ဆရာဦးဘိုးချယ်(ဆရာချယ် )က ရှေးဟောင်းအတ္ထုပတ္တိ စာအုပ်တွင် –
ယခုအခါမွတ်သုသာန်လွန်ခဲ့သော ခရစ်သက္ကရာဇ် “၁၇၀၀ – ၁၈၀၀ “ကျော်လောက်အတွင်းက ဆောက်လုပ်ထား
ခဲ့သော မူစာဒေဝန် ဗလီ နှင့် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၆၈ – လောက်က ဆောက်လုပ်လျက် ယခုအခါ သမယထိ လူမျိုးမရွေး၊
ဘာသာမရွေး ကြည်ညို ကိုင်းရှိုင်းခံနေသော “ဘဒ္ဒါရမကန်ခေါ် ဗုဒ္ဓေါမော်ဂူ နှင့်ာဗလီ “၊ မြောက်ဦး (ယခင်-မြို့ဟောင်း)
နှင့်တစ်ကြိမ်တည်းဆောက်လုပ်ခဲ့သော“ စန္ဒီခန် သို့မဟုတ် သင်းသီး ဗလ”ီ ကိုထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် မွတ်ဆလင်များသည်
ရခိုင်ပြည်တွင် ပင်ရင်းဒေသအဖြစ်ဝင်ရောက်နေထိုင်သည်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစပရိစ္ဆေဒ ရှည်လျားခဲ့ကြောင်းကောင်းစွာ သိရှိ
ရခိုင်ပြည်ပေါက်တောမြို့နယ်၊ကျောက်တော်မြို့နယ်၊မင်းပြားမြို့နယ်များတွင် ထိုမွတ်ဆလင်များမှ ဆင်းသက်လာသော ရခိုင်မွတ်ဆလင်တို့သည် လယ်ယာကိုင်းကျွန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကာ ရှေးဆန်ဆန် ထေိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပေသတည်း ဟု ရေးသားထားကြောင်း ကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဘဝသစ် ထူထောင်ရေးပါတီထုတ် (တိုင်းရင်းသတင်းလွှာ စာမျက်နှာ-
၄၄- ၄၅ ) ၊ကင်းလွှတ်ခွင့်အမှတ်(န/သ – ၀၈၅) စာအုပ်တွင် ကိုးကားဖေါ်ပြသည်။
ရခိုင်မင်းများသည် မွတ်ဆလင်များဘွဲ့အမည် ခံယူပြီး အုပ်ျုပ်သည့်အတွက် အယူမသည်းခြင်း၊ တိုင်းပြည် စည်းလုံးမှု
ပို၍ ရရှိခဲ့သည်။ရှေးရခိုင်မင်းများသည်အမြော်အမြင်ကြီးမားကြောင်းကို ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ရခိုင်ဘုရင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ၊မကွဲခြားဘဲမျှမျှတတအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေး လွပ်လတ်ခွင်
့ပေးခြင်း ၊ဘုရင်ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်စည်းလုံးရေးအတွက် အစ္စလာမ် အမည်ဘွဲ့ ကိုခံယူခြင်း ရှေးရခိုင် ဘုရင်များ၏ အမြော်အမြင်ကြီးမားပုံကိုစံနမူနာ ယူစရာဖြစ် သည် ဟု ဦးကြည်(B.A )ရေးမြန်မာ ရာဇဝင်သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာကို
ကိုးကား ၍တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစု သတင်လွှာက ရေသားဖေါ်ပြထားသည်။
According to former Chairman of Historical Commission, Burma, Lt. Col. Ba Shin’s “Coming of Islam to Burma 1700 AD”, Min Sawmon as Solaiman Shah, the founder of Mrauk-U dynasty and his successor were greatly influenced by Islamic culture. The practice of adoptingaMuslim name or title by the Arakanese kings continued for more than two hundred years (1430 – 1638). This titles which appeared in Arabic script / Persian Kufic on their coins is given below:
SL. No. Names of the kings Muslim Names Reigning period
Narameikhla (a) Sawmon Solaiman Shah 1430-1434 AD.
Meng Khari (a) Naranu Ali Khan 1434-1459
Ba Saw Pru Kalima Shah 1459-1482
Dawlya Mathu Shah 1482-1492
Ba Saw Nyo Mohammed Shah 1492-1493
Ran Aung Noori Shah 1493-1494
Salimgathu Sheik Abdullh Shah 1494-1501
Meng Raza Ilias Shah – I 1501-1513
Kasabadi Ilias Shah – II 1513-1515
Meng Saw Oo Jalal Shah 1515
Thatasa Ali Shah 1515-1521
Min Khaung Raza El-Shah Azad 1521-1531
Min Bin (a) Min Pa Gri Zabuk Shah 1531-1553
Min Dikha Daud Khan 1553-1555
Min Phalaung Sikender Shah 1571-1591
Min Razagri Salim Shah – I 1593-1612
Min Khamaung Hussain Shah 1612-1622
Thiri Thudama Salim Shah – II 1622-1637
Lt. Col. Ba Shin, Coming of Islam to Burma 1700 AD, op. cit., P.5; Dr. Qanungo, A History of Chittagong, Vo. 1, op. cit., P. 233, 239, 250 & 271; Moshe Yegar, The Muslims of Burma, 1972, op. cit., P.19; Siddiq Khan, op. cit., PP. 248-249; Harvey, op. cit., P140; D.G.E Hall, op. cit., P.330; ABM Habibullah, Arakan in Pre-Mughal History of Bengal, JASB, 1945, PP. 34-35.
Permalink အဘစွာ က on Sunday တုန်းက ပြန်တဲ့စာ
စာမျက်နှာ 30 –
← ပသီလူမျိုးစု (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခြင်း)- စာမျက်နှာ(6)
ပသီလူမျိုးစုစကားဝိုင်းကို (မနာလိုအုပ်စုကတိုက်ခိုက်၍ဖျက်သိမ်းခံရခြင်း)- စမျက်နှာ( 8) →